Jaamacadda Carabta oo ku baaqday in Soomaaliya laga taageero xagga Tamarta – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Jaamacadda Carabta oo ku baaqday in Soomaaliya laga taageero xagga Tamarta
-Xoghayaha guud ee Ururka Jaamacadda Carabta , Ahmed Aboul Gheit, ayaa ugu baaqay Dowladaha xubnaha ka aha Jaamacadda Carabta iyo hay’adaha dhaqaalaha bixiye ee heer Gobolka in Soomaaliya laga taageero dhanka farsamada iyo Tamarta.
Ahmed Aboul Gheit, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la tababaro Dadka ka shaqaynaya howlaha farsamada iyo tamarta si kor loogu qaado xirfaddooda.
Xoghayaha ayaa ujeedka baaqiisa ku tilmaamay sidii loo yarayn lahaa dhibaatooyinka xagga korontada ee haysta Soomaaliya.
Kaaliyaha Xoghayaha, ahna Madaxa qeybta dhaqaalaha ee Jaamacadda Carabta, Kamaal Xasan Cali oo ku hadlayay Magaca Xoghayaha ayaa isaga oo ka qeyb galayay meertada 13-aad ee shirka Golaha Wasiirrada Tamarta Dowladaha Carabta wuxuu intaa ku daray in 40-ka Sano ee soo socda ay Mashaariicda xagga Tamartu gaari doonaan 45 Trillion, sida ku cad warbixinno Dowli ah oo uu kaaliyuhu soo bandhigay.
Previous articleWasaaradda Gargaarka oo sheegtay in sidii loogu talo galay ay u socdaal howlaha gurmadka
Next articleWasaaradda Shaqo-gelinta oo War-murtiyeed ka Soo Saartay Shirweynihii Hirgelinta Qoondada haweenka
wararkii ugu danbeeyey ee Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim jong Un